नेपाल अाइडल अाज देखि टेलिभिजनमा ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
नेपाल अाइडल अाज देखि टेलिभिजनमा !
२०७५ साउन २४ बिहीवार
काठमाडाैँ, २४ साउन । नेपाल अाइडलकाे दाेस्राे संस्करण अाज देखि टेलिभिजनमा देखाइने भएकाे छ । पहिलाे संस्करणकाे भव्य सफलता पछि धेरैजना नेपाल अाइडल २ काे प्रतिक्षामा थिए । अडिसन राउण्ड धेरै पहिले सकिए पनि पर्दामा भने अाजदेखि मात्र प्रसारण हुने भएकाे हाे ।
अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज रियालिटि शाे नेपाल अाइडलकाे पहिलाे सिजनकाे उपाधी बुद्ध लामाले जितेका थिए भने निशान भट्टराइ र प्रताप दास क्रमश दाेस्राे र तेस्राे भएकाे थिए । भाेटिङ सिस्टममा धाँधलीकाे अाराेप लागेपनि अन्ततः नेपाल अाइडलकाे पहिलाे संस्करण यादगार बनेकाे थियाे । अघिल्लाे वर्षका धेरै सहभागीहरुले अाफ्नाे एल्बम निकालेर संगित क्षेत्रमा जमिसकेका छन् भने केही यहिँ स्थापित हुने जमर्काे गर्दैछन् ।
देशका विभिन्न ठूला शहरहरुमा गइ अडिसन लिइएकाे यस शाेका जजहरु पहिले कै अर्थात इन्दिरा जाेशी कालीप्रसाद बास्काेटा र न्हुँ बज्राचार्य रहनेछन् । नेपाल अाइडल एपि वान एचडी टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता विहिबार र शुक्रबार राति प्रसारण हुनेछ ।
यी बलिउड स्टार जसले भाडाको कोखबाट सन्तान जन्माए